सेयर बजार अब के हुन्छ ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सेयर बजार अब के हुन्छ ?
नेप्सेको रेखा उत्तर फर्कने आशमा बसेका लगानीकर्ता दक्षिणतर्फको निरन्तरको यात्राले थप निराश मात्र होइन, थकित नै भइसकेको स्पष्ट देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले सेयर बजारको खस्कँदो ताकतलाई उकास्न केही दिनअघि पेन किलर त दिए तर त्यो केवल पेन किलरमा मात्र सीमित भयो, बजारको वास्तविक पीडा र दुखाइमा कुनै कमी आएन । अर्थमन्त्रीले सेयर बजारबारे खुलेरै दिएको सकारात्मक अभिव्यक्तिबाट बढेका नेप्सेका केही अंक पनि विस्तारै सकिँदै गएका छन् र नेप्से पुनः पुरानै विन्दुतर्फ आकर्षित भइरहेको छ । अर्थमन्त्री अझै बोल्न छाडेका छैनन् । उनी दोहोर्‍याइरहेका छन् सेयर बजारमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय यही हो ।
सेयर बजार कति ताकतहीन भइसकेको छ भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ । हुन त सेयर बजारमा अर्थमन्त्रीको बोलीको प्रभाव भनेको अल्पकालीन मात्र हो । यस्ता बोलीले दीर्घकालीन महत्व र अर्थ राख्दैन । उनै अर्थमन्त्रीले भनेका छन्- बजारको विकासका लागि नीतिगत र कानुनी आधार बलियो हुनुपर्छ । नीतिगत र कानुनी मात्र होइन, प्राविधिक आधार पनि दरिलो हुनुपर्छ । ताकि लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्न सकुन् ।
अर्थमन्त्रीले बारम्बार सकारात्मक कुरा गरिरहँदा र लगानीका लागि आवह्वान गर्दा पनि सेयर बजार अझै किन तल झरिरहेको छ ?
अर्थमन्त्रीले बारम्बार सकारात्मक कुरा गरिरहँदा र लगानीका लागि आवह्वान गर्दा पनि सेयर बजार अझै किन तल झरिरहेको छ ? वा बजार किन यू टर्न गर्न गाह्रो मानिरहेको छ ? धेरैको प्रश्न यही हुनसक्छ ।
सेयर बजार लगानीको एउटा विकल्प हो तर एक मात्र विकल्प भने अवश्य होइन । सेयर बजारको तत्कालको व्यवहारको मूल्यांकन गर्न प्रतिस्पर्धी विकल्पलाई पनि सँगै केलाउन आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धी विकल्प भन्नाले लगानीकर्ताले भएको पैसा लगानी गर्नका लागि सँगै राखेर तुलना गर्ने विकल्पलाई लिइन्छ ।
अहिले भएका अन्य विकल्पमध्ये प्रतिस्पर्धी विकल्पका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिने निक्षेप नै हो । निक्षेपमा बचत र मुद्धति दुवै निक्षेपलाई लिइन्छ । हामीसँग उपलब्ध सेयर बजारको प्रतिस्पर्धी विकल्प भनेको यही हो । लगानीको विकल्प छनौट गर्दा सेयरमा प्राप्त हुने प्रतिफल र निक्षेपमा प्राप्त हुने प्रतिफल (ब्याज)को तुलना हुने गर्छ । जोखिमका हिसाबले यी दुई विकल्प फरक भए पनि सेयर बजारमा भने तुलना गरिन्छ । बढी जोखिम लिएबापत निक्षेपमा पाउने ब्याजमा केही प्रिमियम थपेर सेयरमा प्रतिफलको आश गरिन्छ ।
यी दुई विकल्पको तुलाना गर्दा लाभांश प्रतिफल र ब्याजदरको तुलना गरिन्छ । जस्तो सेयरमा प्राप्त हुने लाभांशलाई सेयरको तत्कालको बजार मूल्यले भाग गर्दा आउने परिणामलाई लाभांश प्रतिफल भनिन्छ । निक्षेप वा सेयर भन्ने विकल्पको छनौट गर्दा लगानीकर्ताले यही लाभांश प्रतिफल र ब्याजदरलाई तुलना गर्छन् र लगानी निर्णय अगाडि बढाउँछन् ।
निक्षेपको ब्याजदर अझै पनि ९ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसको अर्थ एक बर्षे मुद्धतिमा वाणिज्य बैंकमा पैसा राख्दा लगानीकर्ताले कम्तीमा ९ प्रतिशत ब्याज प्राप्त गर्ने अवस्था छ । र त्यो पनि वार्षिक रुपमा नभई त्रैमासिक रुपमा खातामा ब्याज प्राप्त हुन्छ । त्रैमासिक रुपमा प्राप्त हुने ब्याजको चक्रवृत्ति हिसाब गर्ने हो भने यो दर अझै माथि पुग्छ । यस्तै बचत खाताको ब्याज पनि ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसमा पनि त्रैमासिक रुपमा प्राप्त हुने ब्याजलाई चत्रवृत्ति हिसाब गर्दा देखाएको ब्याजदरभन्दा वास्तविक ब्याज बढी हुन जान्छ ।
अर्को तर्फ अहिलेसम्म लाभांश घोषणा गरेका वाणिज्य बैंकले दिने लाभांशको औसत प्रतिफल ६ देखि ७ प्रतिशत देखिन्छ । बाँकी बैंकहरुले घोषणा गर्ने लाभांश पनि अहिलेको सेयर मूल्यका आधारमा यस्तै प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यी दुईवटा प्रतिफलको तुलना गर्दा अझै पनि ब्याजदर बढी छ । यसले गर्दा पनि सेयर बजारतर्फ लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् ।
सेयर बजारमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन ब्याजदरभन्दा लाभांश प्रतिफल बढी हुनुपर्छ ।
सेयरमा आकर्षित हुनका लागि कम्तीमा पनि लाभांश प्रतिफल ब्याजदरभन्दा पनि बढी हुन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि मैले क्यानेडियन ठूला बैंकहरुको ब्याजदर र ती बैंकले दिने लाभांश प्रतिफलको तुलना गर्दा बैंकले दिने निक्षेप (विशेष गरी एकदेखि तीन बर्षे मुद्धति खाता) को ब्याज लाभांश प्रतिफलभन्दा कम छ । यति मात्र नभई ब्याजदरको तुलनामा लाभांश प्रतिफल करिब दोब्बर छ । जस्तो ब्याजदर दुईदेखि तीन प्रतिशत छ भने लाभांश प्रतिफल ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म छ । लगानीकर्ताले सेयरमा लगानी गर्दाको जोखिम बापतको प्रिमियमसहितको प्रतिफल सेयरमा प्राप्त गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । यस्तै अर्को रमाइलो कुरा बैंकले दिने ब्याज र सेयरमा प्राप्त हुने लाभांश दुवै त्रैमासिक रुपमा प्राप्त हुन्छ । तर, हामीकहाँ ब्याज त्रैमासिक रुपमा पाए पनि लाभांश पाउन एक वर्ष कुर्नुपर्छ । लाभांश वितरणको नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यो कम्तीमा पनि तीन महिना बनाइनुपर्छ ।
अहिले हामीकहाँ कम जोखिम लिएर सेयरमा भन्दा बढी प्रतिफल ब्याजबाट नै प्राप्त भइरहेको अवस्था छ । यसै कारण लगानीकर्ता सेयरमा आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । सेयर बजारमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन ब्याजदरभन्दा लाभांश प्रतिफल बढी हुनुपर्छ । पुँजी वृद्धिका कारण नगद लाभांश बाँड्न नसकिरहेका बैंकले यो वर्ष नगद लाभांश वितरणमा बढी जोड गरिरहेका छन् । बैंकले अहिलेको नाफाको वृद्धिलाई कायम राख्न सके भने आगामी वर्ष प्रतिसेयर लाभांश बढेर जानेछ । जसका कारण लाभांश प्रतिफलमा केही वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यही कारण पनि सेयर बजार केही आकर्षक बन्न सक्छ ।
अर्को तर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ल्याएका १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने ऋणपत्रका कारण पनि सेयर बजारलाई प्रभावित गरिरहेको छ । ऋणपत्रमा व्यक्तिले कमै लगानी गरे पनि संस्थाको भने ठूलै लगानी हुने गरेको छ । यसले गर्दा संस्थागत लगानीकर्ता १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल दिने ऋणपत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दा उनीहरुलाई सेयर बजारले तान्न सकेको छैन । यस्तै सेयर बजारमा पैसा आउन नसक्नुको अर्को कारण ऋणको ब्याज हो । निक्षेपको ब्याज केही घटे पनि ऋणको ब्याज घट्न सकेको छैन । निरन्तरको घट्दो बजारमा ऋण लिएर लगानी गर्नु भनेको सेयरको मूल्यबाट हुने नोक्सानमा ब्याज खर्च थपेर थप नोक्सान बढाउनु हो । यसले गर्दा पनि उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी गर्ने अवस्था तत्काल देखँदैन ।
सेयर बजार बढ्नका लागि पुँजी आकर्षित हुन आवश्यक छ । जसका लागि लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा वृद्धि मात्र नभई प्रतिफलका हिसाबले पनि सेयर बजार आकर्षक हुन आवश्यक छ ।
पछिल्लाे - बडादसैं सुरू, आजकी आराध्य शैलपुत्री
अघिल्लाे - पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आँधीखोलामा र्‍याफ्टिङ